थाहा खबर: डा.केसीले 'तपाईं पनि उस्तै नेता' भनेपछि प्रचण्डको जवाफ : 'म प्रचण्ड यस्तै हो, जस्तो छु'
डा.केसीले 'तपाईं पनि उस्तै नेता' भनेपछि प्रचण्डको जवाफ : 'म प्रचण्ड यस्तै हो, जस्तो छु'
काठमाडौं : नेपाल देशभक्त गणतान्त्रिक मञ्चले शनिबार राजधानीमा 'देशभक्त गणतान्त्रिक सम्मान' कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध यो संगठनले माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध भएर साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, खेलकुद, कलाकारिता लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग तीन दर्जन व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्‍यो।
उनीहरुलाई सम्मान गर्न पुगेका थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्डले उनीहरुलाई सम्मानपत्र तथा खादा ओढाएर सम्मान गरे।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नेमा प्रचण्डका अलवा प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी पनि थिए। राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका केसीले मन्तव्यको सुरुमा प्रचण्डको प्रशंसा गरे। प्रचण्डलाई देशको राजनेतार भएको र जनताले धेरै आशा तथा अपेक्षा राखेको बताए। उनी प्रशंसामा मात्रै रोकिएनन्। उनले बोल्दै गएपछि प्रचण्डको आलोचना गरे।
‘उहाँ (प्रचण्ड)बाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, देशका लागि केही गर्ने नेता भनेको प्रचण्ड मात्र सोचेका थिए', उनले आलोचना सुरु गरे, 'तर, अहिले उहाँमा त्यस्तो देख्न छाडियो।’
प्रचण्डबाट आफ्नो परिवारका सदस्य र आसेपासेलाई सत्तामा पुर्‍याउने खेलको अन्त्य गर्ने आश राखेको तर त्यो नपाएको केसीले बताए। ‘प्रचण्डले आफन्तलाई सत्तामा लाने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो। उहाँ मात्र यसको विरोधी हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो’, उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय उल्टो भए जस्तो लाग्न थालेको छ। त्यसमा उहाँले पुनर्विचर गर्नुपर्ने आवस्यक देखिएको छ।'
केसीपछि बोल्ने पालो आयो प्रचण्डको। उनले डा.केसीले उठाएका प्रश्नको जवाफ फर्काए। उनले भने,‘उहाँले बोल्न थालेपछि केही आलोचना राख्नु भएन भने त्यो डा. सुरेन्द्र केसी नै हुँदैन। सुरेन्द्र केसी भनेकै त्यसरी बोल्ने मान्छेको नाम हो।’
डा. केसी आलोचना मात्रै गर्दै आएको भन्दै प्रचण्डले अगाडि भने, 'उहाँको समाज र राजनीतिक व्यक्तित्वलाई योगदान गर्ने माध्यमै यही हो। त्यसले नै तपाईले लगातार भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ।'
प्रचण्ड यत्तिमै रोकिएनन्। उनले आफू विगतदेखि नै फरक खाले काम गर्दै आएकोले फरक भएको बताए। ‘म प्रचण्ड पनि यस्तै हो, म जस्तो छु। तपाईले हेर्नुभयो भने २०४६ सालको जनआन्दोलन भन्दा अगाडि म एउटा पार्टीको महासचिव भएको थिएँ’, उनले भने,‘तुरुन्तै धेरै पार्टी मिलाएर एकता केन्द्र बनाएँ। पाँच वर्ष संघर्ष गरेपछि जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको देख्नुभयो। धेरै ठूलो अपेक्षा तपाई(डा.केसी)ले पनि गर्नुभएछ, तपाईलाई धन्यवाद।’ देशमा शान्ति संझौता हुँदै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्नसम्म आफ्नो धेरै योगदान गरेको उनले बताए।
सुशासन र विकासको अवसर
अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरि मुलुकलाई सुशासन र विकासका लागि अवसर आएको बताए। उनले भने,‘नेपाली जनताले वाम गठबन्धनका दुई तिहाइ नजिक पुर्‍याएका छन्। यो विकासका लागि अवसर हो। यो चुनौती पनि हो। अवसर चुनौती बिहीन हुनै सक्दैन। उनले राजनितिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वाम गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए।
संविधान कार्यान्वय भएर संक्रमण हटिसकेको अवस्थामा राजनितिक नेतृत्व पनि निराशामा नयाँ आत्मविश्वास र उत्साहका साथ अघि बढिरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो।
प्रचण्डले देशको हितका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुन लागेको बताए। उनले शक्तिशाली कम्युनिष्ट केन्द्र बनाएर विश्वमा सन्देश दिने बताए। उनले भने,‘धेरै अनुभवका बीचबाट एउटा शक्तिशाली कमन्युष्ट केन्द्र बनाउने र नेपालबाट दक्षिण एसिया र विश्वमा एउटा सन्देश दिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ।’
ओलीले भने - दुईवटा प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले छेक्यो
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि आक्रमण भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त ग...